China Folding yemari trolley DX3015 mugadziri uye mutengesi | Duoduo
Folding mikwende trolley DX3015
Ita Nha .:DX3015
Yakavhurwa Ukuru: 27.5x31x95CM
Huru dzakakomberedzwa: 39.5x27x8.5CM
Kukura kweplate: 27x22CM
Kugona: 20 KGS
Package: 10pcs pakatoni
Saizi Carton: 55x42x29CM
Mini yakapetwa mutoro ngoro, yakapepuka uye inogona kupetwa, inogona kuiswa muhomwe yako.
Yakachengetedzwa kunze kwekunze kunoratidzira mitsara yakachena uye yakavanzika sangano.
Inogadziriswa inotsigira tambo inorembera zvikwama uye inodzivirira kusimuka.
Mawiricheya akakwakwa mavhiri ekugadzirisa kubata.
Rweshure tambo inotambanudza kusvika pakapetwa hurefu hwayo kuti ibate mizhinji yehukuru hwakakura mitoro.
Inogona kupetwa kuitira nyore kutakura uye kuchengetedza. Inodzvanywa yekuchengetedza nzvimbo shoma.
Ita Kuti Basa Rako Rifambire Rakareruka: Mawiricheya ane mavhiri akaomeswa anogara kwenguva refu uye akanyarara akanyarara ayo anoita kuti kubata uye kufambisa ngoro kuve nyore.
Elastic Tambo: Iyo yakavakwa-mukati marefu Bungee Tambo dzinotambanudza kusvika kunenge kaviri urefu hwakareba kuti ubatise akawanda akasiyana masayiti matoro. Inogadziriswa inotsigira tambo inorembera chikwama uye kudzivirira kuchinja. Chigadziko chakagadzirwa nezvinhu zvakasimba uye zvinogara kwenguva refu kuti zvifambe zvakachengeteka zvinyoro, mapasuru, mabhokisi.
Uchiri kukuvadza kuti mutakuri unorema here? Uchiri kunetsekana nemutoro wakawandisa parwendo rwebhizinesi? Ndichiri kutsamwiswa nekunetseka kwekutenga kwegrocery? Iwe unoda iyi mini inotakurika mizhinji inoshanda inoshanda, yakapetwa nyore uye isa muhombodo yako.
Zvichienderana nenhandare yendege uye nendege dzauri kubhururuka nendege, ungangodikanwa kuti utarise ngoro yako yemaradhi nemasaga ako. Kana iwe usiri kuronga kutarisa chero mabhegi, iwe uchada kuratidza neyemhepo ndege yako kana kwete iyo ngoro ichabvumidzwa sechinhu chetakura. Kuti uite kufamba zvishoma zvishoma zvive nyore, ungangoda kufunga nezvekutora ingoro yekutakurisa zvinhu. Izvi zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvekufamba zvive nyore. Compact Folding Laga Cart Cart Yakasimba, kuvheneka-huremu kuvaka, kuvhura uye kuvhara mumasekondi kupa nyore maneuverability. Oversized rugged mavhiri ekuvandudza kubata Adaptable rutsigiro tambo zvikwangwani zvikwikwidzi uye zvinotadzisa kuchinjisa Kwakachengeteka kutakura mitoro, mabhokisi, mapasuru.
Yepfuura: Folding mikwende trolley DX3013
Inotevera: Kuruoko Dutu Rekushandisa Rori LH5001
Foldable Yakatakura Trolley
Folding Yakatakura Trolley
Isingaremi Kupukuta Trolley Yenhumbi
Diki Folding Yakatakura Trolley
Folding mikwende trolley DX3013
Folding mikwende trolley DX3012
Folding mikwende trolley DX3011